नयाँ वर्ष २०६९ को शुभकामना ! [Happy New Year 2069]
Aakar April 13, 2012
आज देखि नयाँ वर्ष २०६९ लागेकोछ ! हुन त दिन, हप्ता, महिना उनै हुन् ! बिहान, दिउँसो, बेलुका अनि रातीको आफ्नो ‘टाइमटेवल’ पनि उही नै हो ! तर पनि नयाँ वर्ष भन्ने बित्तिकै, आजको शुक्रबार अन्य शुक्रबार भन्दा पृथक र विशेष छ । यो शुक्रबार नयाँ वर्षको दिनमा परेको छ !
मान्छे उही नै हुन्, सोच उनै हुन् तर पनि नयाँ वर्ष लागेपछि हामी केही राम्रो सोच्ने प्रण गर्छौँ, राम्रो गर्ने प्रण गर्छौँ ! आफ्ना आशा र विश्वासलाई अझ दरिलो पारेर, अघि बढ्ने कुरा नै हुने गर्छन्, वर्षको पहिलो दिनमा ! तर वर्षको अन्त्य सम्म आइपुग्दा, आफूले सोचेका – नसोचेका अनगिन्ती कुराहरु हुन्छन् ! अनि वितेको वर्षलाई नियाल्दा, कुनै कुरा राम्रा लाग्छन्, अनि कुनै कुरा आफैँलाई झुर लाग्छन् ।
सायद नयाँ वर्ष, आफूले गरेका कामहरुलाई फर्किएर हेर्ने स्थान पनि होला, अनि सकरात्मक सोच्ने समय होला । २०६८ मेरा लागि निकै महत्वपूर्ण वर्ष रह्यो ! २०६८ मा इन्जिनियरिङ पास गरियो, पहिलोपटक रेल अनि जेट चढियो, पहिलोपटक नै बेङ्लोर गइयो, इन्टर्नसिपको लागि ! हुन त जिन्दगीमा गरिने सबै कुराहरु पहिलोपटक नै हुन्छन्, तर पनि पहिलोपटक कुनै काम गरियो भने त्यसको बेग्लै खुशी लाग्ने रहेछ ! जिवनमा पहिलोपटक “जागिर” खाने देखि लिएर, पोखरामा हावामा कावा खाँदै प्याराग्लाइडिङ नि गरियो । अनि पहिलोपटक ‘व्यस्तता’ भनेको के रहेछ, भन्ने कुरा पनि अनुभव गर्न पाइएको छ ! धेरै कुरा गर्न मन लाग्छ तर यति व्यस्त भइएकोछ कि, यही ब्लगमा लेख्ने काम पनि निकै पातलिँदै गएको छ !
नयाँ वर्षमा यो नै गर्छु भन्ने योजना बनाइएको छैन ! जे हुन्छ राम्रै को लागि हुन्छ, भन्ने कुरामा प्राय: विश्वास गर्छु ! अन्जानमै गरिएका कुराहरुलाई पनि निरन्तर अभ्यास गर्दै जाँदा, सिक्दै र सुधार गर्दै जाँदा, गरेका प्राय: कुराहरुमा सफल भइने रहेछ भन्ने लाग्छ । आफूले जानेका साना साना कुराहरु अरुलाई पनि बाँड्दै जाँदा आफूमा आत्मविश्वास पनि बढ्दोरहेछ ! धुलिखेलको ४ वर्षे बसाइ पछि, फेरि काठमाडौँ फर्किएको छु ! ४ वर्ष अघि विश्वविद्यालय छिर्दा र गतवर्ष विश्वविद्यालयबाट बाहिर निस्कदाँ आफूमा आकास-पातालको फरक पाएको छु ।
नयाँ वर्ष लागि नै सकेको छ, बितेको समय फर्केर आउँदैन तर त्यस समयमा गरिएका गल्तिहरुलाई सुधार्दै, त्यसै गल्तिबाट सिक्ने प्रयास गर्दै अघि बढ्नेछु । आफ्नो ठाउँ र सामर्थ्यले भ्याएसम्म, अनि आफ्नो ब्रम्हले देखेसम्म सबैको भलो हुने कुरा गर्न नै कोशीस गर्नेछु !
“आकार पोष्ट” ब्लग पढ्नुहुने, “आकार अनिल” भनेर चिन्नुहुने, माया र सहानुभुति दर्शाउनु हुने, देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई नयाँ वर्ष २०६९ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ! तपाईहरुको पल शुभ बितोस् ! “Happy New Year 2069” !
Krishna Thapa August 1, 2012 at 11:39 AM
नया बर्षको धेरै धेरै शुभकामना आकारजी र तपाइंको यो ब्लग भिजिट गर्न आउने सबै मित्रहरुलाई ..
RM August 1, 2012 at 11:39 AM
2068 was also for meanice year and hope this 2069 will help me to fulfill my dream too. :-)
Nice Post Aakar. Keep writing. I'm sure it will help you to bring our your inner creativity and make more mature in writing and that will be base of your passion - The Writing. Wish you all the best. God bless you. :-)
नव वर्ष २०६९ को उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
~ J :-)
Sachin Joshi August 1, 2012 at 11:39 AM
असाध्यै घतलाग्दो ब्लग पोस्ट .... साह्रै नै मज्जा आयो पढेर.... नयाँ बर्षको धेरै धेरै शुभकामना साथी ... तिम्रो उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आउने दिनहरु पनि शुभ रहोश...